Banaanbax maalintii labaad ka socda Muqdisho - BBC Somali
Banaanbax maalintii labaad ka socda Muqdisho
10 Juunyo 2011
Image caption Dadka isku soo baxay ayaa jidadka Muqdisho ku gubay taayeero
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay banaanbaxyo ayaa ka socda magaalada Muqdisho maalintii labaad kuwaasi oo lagu diidan yahay in uu is casilo Raiisul Wasaaraha Dowladda KMG ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi.
Wararka ayaa sheegaya in banaanbaxyada ay qaarkood isku beddeleen gacan ka hadal. Waxaa kale oo la sheegayaa inay jiraan dhaawac.
Magaalada waxaa maanta mar kale isugu soo baxay oo dibedbaxyo waaweyn ka dhigay kumanaan qof oo ka soo horjeeda go'aamada ka soo baxay wada hadaladii Madaxweynaha Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee Kampala.
Dadka isku soo baxay oo taageersan xukuumadda Raiisul Wasaare, Maxamed Cabdullaahi, ayaa waxa ay wataan boorar ay ku qoran yihiin sida ay uga soo hor jeedaan heshiiska Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha oo ay ku tilmaameen mid aan dan u ahayn umadda Soomaaliyeed.
Go'aamada heshiiska Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha waxa ku jira in muddo soddon maalmood gudahood ah uu isku casilo Raiisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Maxamed.
Waxaa kaloo dibadbaxyo ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo dalka Soomaaliya meelo kala duwan ka mid ah.
Waxaa ku jira Gobolka Geddo magaalooyin ka tirsan sida Garbahaareey iyo meel ka mid ah gobolka Galguduud.